Ejiji ọla ntị - mgbapụta - ọlaedo, si ọlaọcha, na-acha ọcha gold, olu, na cubic zirkonia, pel
Ndị na-erube isi - ndị kwesịrị ekwesị na otu e si eji ọla edo ntị-pridevki na-eyi?
Ụmụ nwanyị na afọ ọ bụla na-adọrọ mmasị, dị omimi. Ha na-achọ ịpụta ma mesie ha ike. Otu ụzọ bụ ọla. Ogbaaka ndi ozo nwere ogologo oge, mana ha di iche na iche ha bu n'eziokwu na ha kwesiri ndi nwanyi.
Kedu ndị bụ ọla ntị?
Ọ bụrụ na ịhọrọ ezigbo ihe nlereanya, mgbe ahụ i nwere ike ikwu n'enweghị ihe ọ bụla na ọla ntị-pridevki dabara ụmụ nwanyị niile n'emeghị ya. Ha na-ekwusi ike ka onye nwe ya dị ọcha. N'ihi eziokwu ahụ na ịchọ mma a na-elekwasị anya n'akụkụ ala nke ihu, a na-atụ aro ya karịsịa maka ụmụ agbọghọ nwere ihu na ihu anọ. N'okwu a, ọ ga-eme ka ihe ngosi ahụ dokwuo anya.
Ngwongwo ọla ntị ọla edo
Ọchịchọ maka ndị na-achọ ọla na ndị na-eche echiche efu nyere aka n'eziokwu ahụ bụ na a na-emelite ntanetị mgbe niile. Gold-earrings-prodevki na-enwe mmasị dị ukwuu n'etiti ndị inyom ejiji. Ngwongwo a dabara na ihe niile ma ewezuga ya ma weere ya otu n'ime ihe kachasi oke oke. Ọ ga-enye okomoko na ụdị ọ bụla. Otu n'ime nhọrọ ndị a chọrọ bụ ọla site na ihe edo edo. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe, ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche dị na pink, edo edo ma ọ bụ nchikota ha.
Ọla ntị ọla edo
Ọ bụrụ na-amasị gị na-acha ọcha - ezigbo kwesịrị anya ọla ntị-prodevki nke ọlaọcha. Na mgbakwunye na njirimara ọdịmma, ihe a anaghị eme ka ihe ọ bụla na-akpata nfụkasị. Ọ mara mma ma na-enwu gbaa. Ọ bụrụ na ọ na-eme na mberede na ngwaahịa ahụ na-agba ọchịchịrị, ọ nwere ike kpochaa ọbụna n'ụlọ, ọ ga-adịkwa ọzọ. Nhọrọ ndị a chọrọ dị ọtụtụ, ya mere ịnwere ike ịchọta uwe maka ejiji kwa ụbọchị, nke dị mma maka uwe mgbede .
Ejiji ọla edo
Ndị kachasị ewu ewu n'etiti ụmụ agbọghọ bụ agbanaka ọla ntị. Ha nọ n'ọtụtụ dị iche iche na-echekwa ụlọ ahịa ọlaọcha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị iche iche, mgbe ahụ i nwere ike ime ka onye ọ bụla nwee ike ịchọrọ nna ya ukwu ma mee ka ọ bụrụ ihe ọ bụla chọrọ. Ụdị ihe ndị a nwere ọtụtụ atụmatụ:
Ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a anaghị enwe esemokwu. Na nke a, ihe dị mma bụ na ịdị arọ nke ihe ịchọ mma dị obere, ya mere ụgwọ ahụ dịkwa ntakịrị. Echegbula onwe gị banyere ihe ga-efunahụ gị nke ntanaka. Jewelers jiri nlezianya tụlee nhazi ahụ, nke na-enye ntụziaka a pụrụ ịdabere na ya.
Ntughari na-ekpuchi anya na-amasị ndị inyom ọ bụla.
Ntugharị na-ekpuchi ihu na-edozi ihu ihu na ihu ndị inyom na-eme ihe ọ bụla.
Osisi-prodevki na cubic zirkonia
Ọtụtụ mgbe, ndị inyom na-ahọrọ ọla ntị-asọmpi na cubic zirkonia. Nke a bụ ọla, ọ nwere ike pụrụ iche. A na-ele ya anya nke ọma na ọla, n'ihi na ntụrụndụ ya, n'ihi ntụgharị uche pụrụ iche nke ìhè, adịghị adị ala karịa diamond. O nwekwara ike inwe agba dị iche iche, ya mere a na-ejikarị ya eme ihe na topaz, sapphire, garnet, aquamarine na ọbụna diamond. Ọ na - eme na ndị ọkà mmụta sayensị jikwaa mepụta ụda lavender pụrụ iche. Ọ bụ ihe pụrụ iche ma mara mma na ngwaahịa ahụ.
Ọnụ ụda-na-agba gburugburu na diamond
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, e ji ọlaọcha ndị e ji nkume ndị dị oké ọnụ kpọrọ ihe. Ha bụ ndị a ma ama, a na-ejikwa nlekọta pụrụ iche mesoo ha. A na-ewere mkpanaka-agbapụta site na ọlaedo na ola diamond dị ka ụlọ ndị ezinụlọ. A chebere ha nke ọma ma nyefee ha n'aka ụmụ ha site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ruo ugbu a, ọdịnala a anọgidewo na-adị mkpa, ọmarịcha ịma mma na ihe dị mma nke ngwaahịa ndị a agaghị adị ọzọ. Ọdịdị ha, njigide na ogologo oge bụ ihe kacha mma na-egosi nke a.
Ụmụ okoro-na-agba mmiri na topaz
Topaz bụ nke abụọ nke nkume dị oké ọnụ ahịa. N'iji ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, ọ na-egbuke egbuke. N'okike, e nwere ọtụtụ agba: acha anụnụ anụnụ, pink, odo, cognac na ndị ọzọ, nke nwere ike ịdị na-eme ya ma ọ bụ site na kpo oku. Ntube-prodevki nke na-acha ọcha na ọlaedo na ndo nke kristal dị oke ọnụ. Ma ụda nke a ga-enweta n'ụzọ dị irè, ịnwetakwu ya.
Ọnụ ọnụ na pearl
Enweghi ihe kariri nwanyi na obi karia umuaka ọla-edo na pearl. Nkume a kemgbe oge ochie ka a na-ewere dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa, akụ na ụba, onye na-eme ihe ike. Dịka ọmụmaatụ, na oge Baroque, ndị inyom si n'ogo dị elu ga-enwe ọla na pearl na mgbagwoju anya na uwe ejiji. Oge ole na ole gara aga, ndị okenye na-eyi uwe a. Ugbu a, ejiji ya na-abịa azụ, ọ bịara doo anya na o kwesịrị ekwesị maka ndị inyom ọ bụla.
Osisi na emerald
Emerald bụ nkume dị egwu ma dị egwu. Ụdị ọgaranya ya nwere ike ịhapụ nwanyi ọ bụla na-enweghị mmasị. Nke a bụ kpochapụ maka ndị ọkachamara. Ọ na-enye mma ịma mma, nke ọ bụla ekike, ọbụna ihe ndị na-adịghị mma, ga-egwu n'ụzọ dị iche. Ngwurugwu a bu ihe zuru oke, ma oburu na o choro ya nwere ike ichota ya na ihe ndi ozo. N'ahịa ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-emepụta ọla , onye ọbụla nwere àgwà nke aka ya. Gold ọla ntị-prodevki Adamas - nke a bụ ezigbo nguzozi nke price na mma.
Ntube - na-agba na bọọlụ
Iji mara ihe pụrụ iche, ọ dịghị mkpa ịzụta mgbanaka ntị ntị na nkume. E nwere ọtụtụ ọdịiche dị na isi ha ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-emeghe ihe. Ọ nwere ike iburu bọọlụ, kpakpando, obi, ụra, ntụgharị. Ihe ndị dị otú ahụ ga-adabara ọ bụghị nanị ụmụ agbọghọ, kamakwa ụmụ nwanyị siri ike. Ụdị a na-ejigide ma na-akwa ụda ga-aghọ ihe dị mkpa, ma maka ejiji na-eme kwa ụbọchị.
Amamihe nke amethyst
Amethyst bụ ụdị ego quartz kachasị mma. Na agba ya, o jikọtara otu odo odo na-acha odo odo na ụdị ncha na nghọta dị iche iche na pearl ma ọ bụ iko. N'oge nkpo ọkụ kpochapu, nkume a kwụsịrị agba ma ghọọ agba odo ma ọ bụ odo. Nke a na-enye gị ohere ịgbanwuo ụwa nke ọla. Ogologo ugbochi umu ugbochi na mkpuru ihe a ga-eme ka uzo di mma ma mee ka nwanyi mara mma. Ọ bụrụ na amethyst nke dị oke ọnụ dị oke ọnụ maka gị, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa na-arụ ọrụ, nke nwere uru ndị a:
nnweta ego ahụ;
iguzogide ịda mbà;
Kedu ka esi esi eme mkpọtụ ọla ntị?
O nwere ike iyi na ịhọrọ ọla ntị ogologo agaghị abụ ihe siri ike, ma e nwere oge ndị bara uru ịnye nlezianya pụrụ iche:
Maka ụdị ọla a, enweghi mgbochi afọ, mana mgbe ị na-ahọrọ ya dị mkpa iji chebaa ọ bụghị naanị ihe nlereanya, kamakwa ihe ị ga-eyi ya. Okpokoro-agbapụta, nke nwere nkume ndị dị oké ọnụ ahịa, nwere ike ghara ekwesị maka onye na-eto eto na uwe akwa . Tụlee ọnọdụ na ikpe ahụ.
Ụmụ nwanyị Chubby ka mma ịchọta ihe ịchọ mma ogologo, ndị nwe oval na-echekwa ịhọrọ ikpere mmiri na-ebu oke (nke ejiri na nkume ma ọ bụ pel), ma ọ bụghị ihu ya ga-adị ka elongated.
A na-emesi ịma mma nke anya ike site n'enyemaka nke ụcha a họọrọ nke nkume ahụ. Mgbe ahụ, mmiri ga-ejikọta ya ma ọ bụ ọdịdị gị.
Ma ọ bụ ọla edo edo edo edo edo, edo edo ma ọ bụ ọlaọcha, ha na-ele anya mgbe niile, ma maka ọdịdị dị mma ma dị mma, ọ ka mma iji nlezianya chee echiche banyere onyinyo ahụ:
Ntughari-na-agba mmiri na pearl pel ga - abụ onye zuru okè zuru ezu na onyinyo ịhụnanya. Ha ga-enye obi ebere, ịdị ọcha na nhichapụ. I nwere ike itinye ụta na mgbaaka, mgbanaka ma ọ bụ olu na otu nkume ahụ.
N'ebe azụmahịa, ọ dị mma, machibido ọla ntị-iyi egwu na obere obere ube bụ ezigbo.
Diamond earrings na diamond na-eme ka o doo anya na okomoko, ọnọdụ na uto dị mma nke nwanyị. Nke a bụ nhọrọ dị mma maka ememme, ebe ị ga-anọ na ihe ngosi. Ndị na-ede akwụkwọ na-akwado ndụmọdụ ndị dị otú ahụ iji mee nkwupụta, ma ọ bụghị ọkụ. Iji mesie mma ahụ ike, ọ ga-aka mma ka ịkọ ma ọ bụ ikpokọta n'ogo dị elu.
Maka ihe oyiyi nke ọ bụla, họrọ oke osimiri na-eji ihe eji achọ mma, n'ụdị obi, kpakpando, okooko osisi, ọkpụkpụ, bọọlụ, obere akara zodiac. Ihe ndị dị otú ahụ ga-adabara ọ bụghị nanị ụmụ agbọghọ, kamakwa ụmụ nwanyị azụmahịa . Isi ihe bụ ịhọrọ ezigbo ihe nlereanya.
Ọdịdị dị mma na nke mbụ na-achọ mma, mgbe ụkpụrụ dị na nrube ntị ndị ntị na-adaba na ụkpụrụ nke ejiji ma ọ bụ ejiji.
E nwekwara ihe ngwọta na-adọrọ mmasị na nke na-abụghị nke na-akwado ụdị dị iche iche. E nwere mkpọchi ntị ntị, bụ nke a na-eme isi ala n'ụdị nko, nke ị nwere ike ịme nkwenye dịgasị iche ma gbanwee ha na uche. Ha nwere ike ịbịara ụmụ amaala dị iche iche ma ọ bụ naanị n'ụdị ọnụ ọgụgụ ọ bụla. Ya mere, site n'enyemaka nke otu mma, ị nwere ike ịmepụta ihe ọhụụ kwa ụbọchị.
Pendants maka ezigbo girlfriends
Kpuchie maka iko
Umu ahihia umu nwanyi
Ekike ejiji na Swarovski kristal
Moto knee pad maka jeans
Mittens gbara ọsọ
Ahịa si nkume dị oké ọnụ ahịa
Ekike ejiji ejiji
Ngwongwo na-esi na MDF
Ọdịdị ihu igwe
Tularemia - mgbaàmà
Atụmatụ maka ịdalata na ọnwa zuru ezu
Ememme Ista maka Ụmụaka
Ịkwụnye ihe ngwugwu doy
Nri na oyi
Nsogbu siri ike - akpata na nti
Kedu ka esi akpọ gin?
FAM nke di mammary glands - gini bu ya?
Ụdị nwoke ahụ: ihe ịrịba ama
Kedu ka esi eweda mmadụ ala?
Ezi obi - Ezi ntụziaka
Ntak emi ikemeke ndikụt eyen emi ke enyo?
Azu na ogwu na oven - ihe kachasị mfe na nke mbụ ntụziaka maka nri ụtọ
Pilaf na-enweghị anụ